Ny iMac 24-inch miaraka amin'ny daty fanaterana ny 28 Desambra | Avy amin'ny mac aho
Ny iMac 24-inch miaraka amin'ny fe-potoana fandefasana ny 28 Desambra
Tsy manara-maso ny datin'ny fandefasana any Apple izy ireo. Nandritra ny herinandro vitsivitsy na dia sahiko aza ny milaza volana, Mihena ny tsy fahampian'ny singa amin'ny vokatra ara-teknolojia isan-karazany (sy mihoatra) ka ao amin'ny Apple araka ny hita dia tsy afa-miala amin'izany izy ireo.
Ny iMac 24-inch mazàna hatramin'ny nahatongavan'izy ireo dia nankafy tahiry tsy dia tsara loatra, saingy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nihena be izany mandra-pahatongan'ny tranokala misy azy ireo ankehitriny. Ireo modely iMac 24-inch vaovao dia antenaina halefa amin'ny 28 Desambra ary tsia, tsy vazivazy Aprily izany ...
Iray volana mahery handefasana iMac 24-inch fototra
Ny fe-potoana tsy maintsy andrasantsika amin'izao fotoana izao amin'ny 25 Novambra 2021 raha te hividy iMac 24-inch "fototra" dia mihoatra ny iray volana. Rehefa misafidy ireo modely fototra isika dia manana io fotoana fandefasana io ary Ny mahatsikaiky dia raha amboarina amin'ny fandrefesanay ny fitaovana dia afaka mahazo ny fitaovana isika herinandro mialoha. Tena mahaliana ary na dia mitovy aza ny fotoana fiandrasana amin'ireo tranga roa ireo (iray herinandro latsaka raha ampiana ny fanamafisam-peo manokana) ny fiandrasana fohy kokoa dia midika fa ny fangatahana dia avo kokoa amin'ny maodely fototra amin'ireo iMac vaovao ireo.
Na ahoana na ahoana, azo atao izany ny iMac naseho tamin'ny volana Mey lasa teo aza averina indray ny tahiry amin'ity herinandro ity ka raha tsy maintsy mitsambikina amin'ny fividianana ny iray amin'izy ireo ianao noho ny filana, ataovy haingana ary mitafy faharetana ianao mandra-pahazoanao. Mety hoe rehefa voapetraka ny baiko dia miova ho tsara kokoa na tsia ny fotoana fanaterana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Ny iMac 24-inch miaraka amin'ny fe-potoana fandefasana ny 28 Desambra
PDF Expert for Mac dia nanapaka 50% ny vidiny tamin'ity herinandro ity